မြန်မာတို့အတွက် The First Myanmar Rss News Reader ! — MYSTERY ZILLION
မြန်မာတို့အတွက် The First Myanmar Rss News Reader !
July 2009 edited September 2009 in Internet & Email
မြန်မာဝဘ်ဆိုက်များ ၊ ဘလော့များ ၊ ဖိုရမ်များမှ POST အသစ်များအား http://www.myanmardaily.net/တွင် ဖတ်ရှူ့နိုင်ပြီဖြစ်ပါ သည်။ Web 2.0 RSS နည်းပညာကိုအသုံးပြုကာ အင်တာနက်ပေါ်မှ မြန်မာဝဘ်ဆိုက်များ ၏ နောက်ဆုံး Update များကို တနေရာတည်းတွင် ဖတ်ရှူ့နိုင်စေရန် စုစည်းဖော်ပြပေး ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဆိုက်တွင် ခေတ်လူငယ် ၊ လျပ်တပြက်သတင်းဂျာနယ် ၊ အင်တာနက်ဂျာနယ် ၊ ရွှေအမြုတေ ၊ Teen Magazine ၊ Idea Magazine ၊ SoccerMyanmar...... ၊ စသည့် အင်တာနက်ပေါ်ရှိ မြန်မာဝဘ် ဆိုက်များ ဘလော့များ ၊ ဖိုရမ်များမှ ဗဟုသုတရစရာ မြန်မာ နှင့် နိုင်ငံတကာသတင်းများ ၊ အိုင်တီ နှင့် အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာဆိုင်ရာ မြန်မာဘလော့များ ၊ မြန်မာ့ရာသီဥတုအခြေအနေ ၊ အနုပညာသတင်း ၊ မြန်မာ MP3 သီချင်းများ ၊ မြန်မာဗီဒီယို ၊ Free Software Downloads ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ဘာသာရေး ၊ အစားအသောက် ၊ မြန်မာ ဗေဒင် ၊ ဟာသ ၊ လူငယ်ကဏ္ဍ စသည့် မြန်မာဘာသာဖြင့် စုံလင်စွာ အားပါးတရ ဖတ်ရှူ့နှိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း MZ မှ သူငယ်ချင်းများကို သထင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည် ။
ကျေးဇူးပဲဗျာ.. ခုလိုသတင်းပေးတာ.. ကျွန်တော်လဲ အိုင်တီခေတ်.. Web 2.0 မှာ နောက်ကျန်မနေရချည်အောင်.. မောင်းတင်ပြီး သောင်းတင်ကို (အဲမှားကုန်ပြီ .. ဘယ်တွေရောက်ကုန်ပါလိမ့်.. ) ဖုန်တလုံးလုံးထအောင် သွားရောက်စောင်မ, ကြည့်ရှုပြီခင်ဗျ..ဒါနဲ့စကားမစပ်.. စောင်မဆိုလို့.. myanmardaily.net က အစ်မလားအစ်ကိုလားဟင်.. အစ်ကိုဆိုတားတားကြောက်ကြောက်နော်..နော်လို့..
ဒီနေ ့တော့ MZ ကိုလာရတာဒီတခုနဲ့တင်တန်သွားဘီ
ဒီလို site လေးကိုပြောပြတာ
အဲဒီကိုသွားလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကို သွားကြည့်လိုက်ရသလိုပဲ..
ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ စုံနေတာဘဲဆိုဒ်လေးက :6::6::6:
ကျနော့်ကို c#နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြေခံအကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြပေးစေချင်ပါတယ်...:5:
MyanmarDaily.Net wrote: »
ဒီလိုမျိုးတစ်နေရာထည့်မှာ ဖတ်ကတော့ ပိုကောင်းတယ်။ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
ဒီထက်ပိုပြီး မျှ ပေးနိုင်ပါစေလို့.....ဆုတောင်းတယ်။ :p:p
ဒီလိုကောင်းတဲ့ ဆိုက်ဒ်လေးတွေရှိရင်လဲ ညွှန်းပေးပါအုံးဗျ
very good new of news
I will be your regular reader ...:30:
အခု လိုမျှပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဘဲ။ နောက်ထပ် ရှိသေးရင် ထပ်မျှပါအုံး....။ဒီကနေ ထပ်မံတောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။:d:p
ကျေးဇူးဗျို့.. ဆိုက်လေးက တော်တော်စုံတယ်...:):):)